Gabar Karoona Qabtay Oo Dhimatay 2 Daqiiqo, ka Dibna.. | Xaqiiqonews
Gabar Karoona Qabtay Oo Dhimatay 2 Daqiiqo, ka Dibna..
Gabar 12 jir ah oo ku nool gobolka Louisiana ee Dalka Mareykanka ayaa dhimatay muddo 2 daqiiqo ka dib markii cudurka Karoona uu ku keenay wadna xanuun.
Juliet Daly oo ka soo muuqatay barnaamijka “Good morning America” ee ka baxa telifishinka ABC ayaa ku warantay in ay tagtay dhimasho qarkeed, ka dib markii Fayruska Karoona uu ku sababay “wadno istaag”
Juliet ayaa tiri “calool xanuunkeyga kala joogsi ma laheyn, nolol ma rabin, dhaqaaq ma rabin, wax walbo waa ay joogsan rabeen”.
Dhaqtarkeeda ayaa barnaamijka “Good Morning America” u sheegay in wadna xanuunka gabadhani uu ka dhashay caabuqa fayruska, isaga oo intaasi ku daray “covid-19 wadnaha wuu ku dhaca”.
Juliet hooyadeed ayaa sheegtay in markii gabarteeda wadnaha laga qabanaayey aysan laheyn calaamadaha caanka ee Karoona, sida qandho, qunfac iyo neef qabatin, waxa ayna sheegtay in gabadha ay ka cabaneysay calool xanuun daran.
Dhaqaatiirta ayaa sheegaya in covid-19 uu keeni karo wadna xanuun gaar ahaan caruurta uu haleelo cudurkan.